नपुसंकता कारण : लक्षण र उपचार - ढोरपाटन पोष्ट
नपुसंकता कारण : लक्षण र उपचार
२०७८ असार ११, शुक्रबार ०९:५०
कुनै पनि व्यक्तिमा हुने प्रजनन् क्षमताको ह्रासलाई नै नपुंसकता भन्ने गरिन्छ । विभिन्न कारणले पुरुष या महिलामा समेत नपुंसकता हुने गर्छ । पुरुषमा नपुंसकता हुन्छ भने महिलालाई यही प्रकृतिलाई बाँझोपनाको नामले चिन्ने गरिन्छ । नपुंसकताको प्रकार र त्यसको कारण निम्नानुसारको छन् ।
नपुंसकता दुई किसिमको हुन्छ
१ प्राथमिक नपुंसक
यो किसिमको नपुंसकता त्यस्ता पुरुषहरूमा हुन्छ जो कहिलै पनि सो समस्याबाट सामान्य अवस्थामा आउन सक्दैनन् ।
२ द्वितीय नपुंसकता
जो व्यक्ति नपुंसकता प्राप्त गर्नको लागि सुरुमा सक्षम हुन्छ । तर पछि अक्षम हुने गर्छ । सो स्थितिमा द्वितीय नपुंसकताको नामबाट नै जान्ने गरिन्छ । पहिलो नम्बरको नपुंसकता मान्छेमा दुर्लभ स्थितिमा मात्रै पैदा हुन्छ । यो प्रायः मानसिक कारण र केही स्पष्ट शारीरिक कारणले हुने गर्छ ।
दोस्रो खाले नपुंसकता अधिक सामान्य स्थितिमा पनि हुन्छ र यसको ९० प्रतिशत मामलामा कार्बनिक एटीयोलोजी हुन्छ । द्वितीय नपुंसकताबाट ग्रस्त हुनेवाला धेरै मान्छे रिएक्टिभ साइकोलोजी विकसित गर्ने गर्छ, जसले यो समस्या पैदा गर्ने गर्छ ।
नपुंसकताको लक्षणहरू निम्न हुन सक्छ
लिंगमा उत्तेजना आउन समस्या हुनु
यौन गतिविधिको समयमा उत्तेजना कायम राख्न कठिनाइ हुनु ।
यौन सम्पर्क गर्ने इच्छा कम हुनु ।
नपुंसकतासम्बन्धित अन्य यौन विकासमा समेत संलग्न हुन्–यौन सम्पर्क गर्ने इच्छा कम हुनु ।
नपुंसकतासम्बन्धित अन्य यौन विकासमा समेत संलग्न हुन्छन् जस्तैः
समय अघि नै स्खलन हुनु
धेरै ढिला स्खलन हुनु
पर्याप्त उत्तेजनाका बाबजुद पनि सम्भोग सुख प्राप्त गर्न असमर्थ हुनु
केही अन्य भावनात्मक लक्षण पनि हुन सक्छन् जस्तै लाज, चिन्ता या शारीरिक सम्भोगमा कम रुचि हुनु आदि । यदि कोही व्यक्तिलाई यस्तो लक्षण नियमित रुपले भइरहेको छ भने उसलाई नपुंसकताबाट ग्रसित मान्ने गरिन्छ ।
चिकित्सकलाई कस्तो अवस्थामा देखाउने ?
यदि माथि उल्लेखित कुनै पनि लक्षण हामीमा देखिन्छ भने चिकित्सकसँग तुरुन्त सल्लाह गर्नुपर्छ । खासगरी यस्तो लक्षण दुई या तीनमहिनाभन्दा धेरै चल्न थाल्यो भने यसमा उपचारको आवश्यकता हुन्छ । यदि तपाईंलाई नपुंसकताको विषयमा कुनै पनि चिन्ता हुन्छ, या स्खलनमा समय लाग्ने गरेको छ भने यसको बारेमा चिकित्सकसँग छलफल गर्नुपर्छ ।
यदि तपाईंलाई मधुमेह, हृदयरोग या अन्य कुनै यस्तै समस्या देखियो, जो नपुंसकतासँग जोडिएको हुन सक्छ ।
यदि तपाईलाई नपुंसकता दोषका साथ अन्य लक्षण महसुस भयो भने भने पनि तुरुन्त चिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ ।
नपुंसकताको कारण र जोखिम : नपुंसकता किन हुन्छ ?
सामान्य नपुंसकताको कार्यलाई तल दिइएको प्रणालीहरूसँग जोडिएको कुनै पनि समस्याद्वारा प्रभावित गर्न सक्छ ।
रक्तधारा (रगतको बहाव)
नपुंसकताको कैयौ सम्भावित कारणहरू हुन्छन् । यसमा भावनात्मक र शारीरिक विकार संलग्न हुन सक्छन् । अघिकांश नपुंसकताको दोष न्युरोलोजिकल, साइकोलोजिकल र हर्माेन सम्बन्धी विकारसँग सम्बन्धित हुने गर्छ । औषधि आदिको प्रयोग गर्नु समेत यसको कारण हुन सक्छ । केही सामान्य कारण यस्तो हुन्छ ।
परिसञ्चरण सम्बन्धी समस्याहरूः
नपुंसकता त्यतिबेला हुने गर्छ जब लिंगमा रगत भरिन पुग्छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल र कएथेरोक्लेरोसिस आदि यो रोग लिंग नपुंसकताको यस प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । यस्तो परिसञ्चरण समस्याहरू नपुंसकताको लागि नम्बर एक कारण हुने गर्छ । प्रायः नपुंसकता दोषको कार्डियोभस्कुलर रोगहरूको पहिलो ध्यान दिन योग्य लक्षण समेत मान्ने गरिन्छ ।
पेल्विसको सर्जरी गर्ने तथा प्रोस्टेट क्यान्सरको लागि प्रोस्टेटको सर्जरी गर्नुले यो नसा क्षतिग्रस्त हुने गर्छ । जसको नपुंसकता प्राप्त गर्न र बनाइराख्ने आवश्यकता पर्छ ।
टेस्टिक्युलर फेलियर, पिट्युटरी ग्रन्थी सम्बन्धी समस्याहरू या अन्य केही विकारको औषधिहरूको सेवनसँग टेस्टोस्टेरोनमा कमी हुन सक्छ ।
यो नपुंसकताको एक सामान्य कारण हो । डिप्रेसन एक शारीरिक डिसअर्डर हो र साथमा एक मनोरोग पनि हो । डिप्रेसनको शारीरिक प्रभाव पनि हुन सक्छ । यदि तपाईं यौन स्थितिमा असहज महसुस गर्नुहुन्छ भने यसको शारीरिक प्रभाव पनि हुने गर्छ ।
लामो समयसम्म मदिरामा लत बस्यो भने यसले पनि नपुंसकताको लागि सहयोग गर्छ ।
चुरोट, बिँडी आदिको सेवन पनि नपुंसकताको कारण हुन सक्छ । अघिकांश पुरुषहरूमा केही विन्दुमा नपुंसकता दोषको समस्या हुन सक्छ । यदि यस्तो धेरै हुने गरेको छ भने यौनको प्रत्याशा (पूर्वानुमान गर्ने) तन्त्रिकाका कारण यसलाई रोक्न सकिन्छ ।
नपुंसकतालाई विकसित गर्ने जोखिमका कारणहरु : यसको जोखिमका कारकहरुमा निम्न विषय सामेल हुन्छन् ।
रगतमा कोलेस्ट्रोलको उच्च स्तर
तमाखुको प्रयोग गर्नु
नपुंसकताबाट बच्ने उपायहरू
खानपिन र रहनसहन आदिमा ल्याउने सामान्य भिन्नताले पनि नपुंसकता सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ । जसबाट नपुंसकता स्वास्थ्यमा एक सकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्छ । तर धेरै मान्छेहरूले यो देख्ने गर्छन् कि सामान्य जीवनशैलीको बदलावले नै यो समस्या साधान गर्न सकिन्छ । जुन निम्नानुसार छन् ।
स्वस्थ र सन्तुलित आहारको सेवन गर्नु
कुपोषणले पनि नपुंसकता दोष हुनुको सम्भावना बढाउने गर्छ । कुपोषणले कोलेस्ट्रोल बढ्ने, उच्च रक्तचाप बढ्ने जस्ता सम्भावनाका कारण पनि नपुंसकताको सम्भावना बढ्न जान्छ ।
धुम्रपान बन्द गर्नु
धुम्रपानको अधिक प्रयोग पनि नपुंसकताको कारण हुन सक्छ । धुम्रपानले सामान्य रुपमा रगतको प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्ने गर्छ । जसबाट नपुंसकता जस्ता समस्याहरू हुन सक्छ । यसबाहेक मदिराको कम सेवनमा कमी ल्याउनु, वजन कम गर्नु, तनावको स्तर कम गर्नु आदि पनि नपुंसकता कम गर्ने उपायभित्र पर्छ ।
स्वास्थ्य एजेन्सीहरु बाट संकलित
जान्नैपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू
बडिगाड गाउँपलिकामा खरका छाना हटाउने कार्यक्रमको लागि २ करोड २५ लाख विनियोजन
बढ्न थाल्यो कोरोना, विज्ञ भन्छन्- कडाइ नगरे अझै बढ्छ
बागलुङ जिल्लामा ५१ हजार नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाइयो
विदेश जाने श्रमिकलाई खोप लगाउन प्रहरी अस्पताल र सैनिक अस्पताल तोकियो